Ezi afọ ọhụrụ 2017 Onyinye maka na enyi nwanyị na enyi nwoke Ezi afọ ọhụrụ 2017 Onyinye maka na enyi nwanyị na enyi nwoke
Ezi afọ ọhụrụ 2017 Onyinye maka na enyi nwanyị na enyi nwoke
New Year bụ otu n'ime nnukwu ememme nke afọ, otú ọ dịghị onye nwere ike na-atụ uche na-ewetara a ụtọ onyinye ya / ya ezigbo enyi, onye ma ọ bụ nwunye. Ebe a anyị na-ekwu ụfọdụ Afọ ọhụrụ 2017 Onyinye echiche maka enyi nwoke, enyi nwanyị, di, nwunye. Dị nnọọ nweta ihe echiche na-eme ka gị onyinye-adọrọ nnọọ mmasị, zụọ ya n'aka ahịa ma ọ bụ mepụta ya n'ụlọ.
Afọ ọhụrụ 2017 Onyinye Ịhụnanya
Nke mbụ anyị ga-atụ aro na-adịghị eche banyere ọnụ ala ma ọ bụ dị oké ọnụ, dị nnọọ eche banyere ihe gị hụrụ, onye ma ọ bụ nwunye na-enwe mmasị kasị pụtara onyinye kwesịrị na-akpali ọ bụghị oké ọnụ. New Year bụ mmalite nke ọhụrụ oge nke 12 ọnwa, otú onyinye ga pụrụ iche nke pụrụ iche otu. Otu ihe, ịzụta ihe i nwere ike mfe imeli ma abịa ya na nza nke ịhụnanya na pen ihe touchy n'ihi onye ị na-aga na-eweta ya. Lee ụfọdụ na-akpali ịhụnanya edoghi nke ị nwere ike pen na a kaadị na-adị n'ebe onyinye gị.
Touchy Line Ịhụnanya
Aga m na-ezu na-enweghị ịhụnanya gị, ịbụ nso m eme m obi hụrụ n'anya. Ekele Chineke maka inye m ndị dị otú ahụ a mara mma Onyinye.
My New Year bụ obi ụtọ, n'ihi na ị bụ ndụ m, Dị m obi ụtọ na ị bụ nwunye m.
Site n'ubọchi ayi ghọrọ di na nwunye, M na-kwara ọ bụla New Year na nke jubigakwara ókè obi ụtọ na ekele. Nke a bụ maka afọ ọzọ.
-Enweghị ndidi na ị dị ka ịbụ-enweghị ikuku. M mkpa ka ị na-ná ndụ m.
-Ada na ịhụnanya na ị bụ doro anya na ihe kasị mfe m na mgbe mere ná ndụ m.
M hụrụ gị n'anya ọ bụghị n'ihi na m kwesịrị ị, ma m mkpa gị n'ihi na m hụrụ gị n'anya.
M hụrụ gị n'anya na-enweghị ebe ọ maara otú, mgbe ole, ma ọ bụ site na ebe. M hụrụ gị n'anya nanị, -enweghị nsogbu ma ọ bụ nganga. M hụrụ gị n'anya n'ụzọ dị otú a n'ihi na amaghị m ihe ọ bụla ọzọ n'ụzọ nke na-ahụ n'anya.
Lelee: Ezi afọ ọhụrụ 2017 Poems
New Year Onyinye Si N'aka mata echiche maka na enyi nwanyị ma ọ bụ Nwunye
Ọ bụrụ na ị nwere ike imeli a igwefoto, ya Aga onyinye kasị mma n'ihi na New Year 2017. Ka i si hụ, ụmụ agbọghọ mbụ naanị onwe ha n'anya ma na ha nwere obi ike weghara ọ bụla mara mma oge nke ndụ ha. Ị nwere ike ịzụta a ezi mma igwefoto inwe ekwentị mkpanaaka na adịghị eleghara ya n'ihu igwefoto n'ihi selfie mkpa a otutu ha.
2 top & uwe mwụda
Ọ bụrụ na ị ga-azụta a ụgbọelu T-uwe elu ma ọ bụ n'elu, e, i nwere ike ibipụta ihe na-akpali dị ka nke ya foto ma ọ bụ ụfọdụ nnukwu e si ị. Ejiji bụ taa ndụ style, otú i nwere ike ịzụta nkecha ákwà dị n'elu, uwe mwụda, gown, t-uwe elu, jeans, jaket etc. ma ọ bụ zuo ihe ọ bụla suut ya.
3 Akpa ma ọ bụ obere akpa
Girls mgbe niile na-ebu ha wallet, akpa ma ọ bụ obere akpa na na kwesịrị fashionable dị ka ị chọpụtara. A fashionable akpụkpọ anụ akpa bụ ihe kasị mma nhọrọ, ma ọ bụrụ na onye gị na prefers.
4 nkwojiaka Watch, mgbaaka, ntị Mgbaaka, mgbanaka, ọla imi
Ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ n'anya na-eji nche, mgbaaka, ntị yiri mgbaaka, mgbanaka, ọla imi etc. na e nwere ọtụtụ aghụghọ dị na ahịa nke ọ bụla n'ime ha.
5 n'ikiri ụkwụ
Ike i were na ole ụkpụrụ nke ikiri ụkwụ dị na ahịa na ọ bụla nwa agbọghọ chọrọ a zuru okè adịkwa n'ikiri ụkwụ ya attire. N'ihi ya ọ pụrụ ịbụ a mma nhọrọ nke New Year2017 Onyinye.
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu banyere Onyinye maka ụmụ agbọghọ, nwere ike na-atụ uche egwuregwu ụmụaka. E nwere fọrọ nke nta niile ụmụ agbọghọ n'anya egwuregwu ụmụaka ọbụna ọtụtụ n'ime ha na-ehi ụra na egwuregwu na ụfọdụ ịhụnanya na-ebu ebe ọ bụla ha na-aga.
New Year Onyinye mata echiche
New Year Onyinye Si N'aka mata echiche maka di ma ọ bụ enyi nwoke
1 nkwojiaka Watch, belt, enyoanya
A nwoke mgbe niile prefers ihe ndị a. E nwere ọtụtụ aghụghọ nke nkwojiaka nche dị na ahịa, otú ị nwere ike ịzụta ihe ga-egboro gị na ịhụnanya. Ọzọ n'akụkụ ndị a bụ mfe oké ọnụ ihe.
Afọ ọhụrụ 2017 HD na akwụkwọ ahụ aja na Images
Ezi afọ ọhụrụ 2017 ọchịchọ, SMS, ozi
2 akpụkpọ ụkwụ
Ọ bụrụ na ị nwere echiche banyere akpụkpọ ụkwụ, ị ga-azụ a ezi mma akpụkpọ ụkwụ gị nwoke, maa ọ ga-masịrị.
3 T-uwe elu
E nwere ihe dị mma karịa ezi T-uwe elu n'ihi na nke a bụ a isi attire nke mbụ na-egosipụta. Ya mere, cheedị echiche nke onye ga-egboro gị na ịhụnanya na dị nnọọ abịa gị na anya n'ihi na New Year, maa ọ ga-adọta mmasị.
Ọ bụrụ na ị na-amasị anyị New Year 2017 Onyinye echiche maka enyi nwoke, enyi nwanyị, di, Nwunye comment n'okpuru.